कर्मचारीको तलब २०१७ सालमा कति थियो, अहिले कति पुग्यो ? [सूचीसहित]
काठमाडौं – निजामती कर्मचारी सेवाको इतिहासमा पटक–पटक कर्मचारीको तलब बढिरहन्छ । बुधवार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तलब वृद्धि गरेका छन् ।
वृद्धि तलब अनुसार निजामती सेवामा सर्वाधिक तलब खाने मुख्यसचिवको आधारभूत तलब आगामी साउनदेखि ६५ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । निजामती सेवामा विगतमा कर्मचारीको तलब कति थियो ? तलब वृद्धिको इतिहास कस्तो छ ? सबैलाई जान्न मन लाग्छ ।
लोकान्तर डटकमलाई २०१७ सालदेखि निजामती कर्मचारीको तलबमानको विवरण प्राप्त भएको छ । ‘निवृत्तभरण व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०७५’ अनुसार निजामती कर्मचारीतर्फ कार्यालय सहयोगीको तलब विक्रम संवत् २०१७ सालमा ४५ रुपैयाँ थियो । त्यसयता २०२२ सालमा बढेर ७० रुपैयाँ पुगेको थियो । २०३० साल कार्यालय सहयोगीको तलब पहिलो पटक तेस्रो अंकमा पुग्दै १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको थियो ।
दिग्दर्शन अनुसार २०१७ सालमा निजामती सेवा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको तलब ९ सय रुपैयाँ रहेको थियो । त्यतिबेला सहसचिवको तलब ७ सय रुपैयाँ थियो ।
२०७३ सालमा बढेको स्केल अनुसार सचिवको तलब ५१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५५ हजार २ सय थियो । २०१७ सालयता २०२२ साल, २०३० साल, २०३३ साल, २०३५ साल, २०३८ साल, २०४१ साल, २०४३ साल, २०४५ साल, २०४७ साल, २०४९ साल, २०५२ साल, २०५४ साल, २०५७ साल, २०६२ साल, २०६४ साल, २०६५ साल २०६६ साल, २०६८ साल २०७० साल, २०७१ साल र २०७३ सालमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको थियो ।
हेर्नुस् तलबको पूर्णविवरण :-
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत र राजपत्रांकित तहका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत वृद्धि गरिने घोषणा गरेका छन् । बढेको तलब आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ ।
तलबमा भएको वृद्धिसँगै कार्यालय सहयोगीको तलब १९ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७३ सालमा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ रहेको ‘निवृत्तभरण व्यवस्थापन दिग्दर्शन २०७५’मा उल्लेख छ ।
२०७१ सालमा कार्यालय सहयोगीको तलब १२ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ रहेको दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । २०७३ सालमा मुख्यसचिवको तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । बुधवारदेखि वृद्धि भएको तलब अनुसार मुख्यसचिवको तलब ६५ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।